नयाँ वर्षमा थोरै उमङ्ग धेरै सकस – Karnalisandesh
नयाँ वर्षमा थोरै उमङ्ग धेरै सकस
प्रकाशित मितिः २ बैशाख २०७७, मंगलवार १२:४१ April 14, 2020
बेगम थापा ‘निश्चल’
बनजङ्गलका बोटबिरुवाहरुले अहिले आफ्ना पहेँला पातहहरु झारेर शरिरमा हरिया पातहरु पहिरेर बनै हरियाली बनाइसकेका छन्। जति सुने पनि सुनु सुनु लाग्ने न्याउली र कोइलीका सुमधुर आवाजले बनका वातावरण नै गुञ्जायमान भइसकेका छन्।
यतिबेला डाँफे र मुनालहरु हाम्रा भिरपाखामा छमछमी नाँच्न थालिसकेका छन्। हिमालका काख र पहाडहरुमा सेता,पँहेला र राता बिभिन्न थरीका लालीगुँराका फूलहरुले बनै सगुन्धित बनाइसकेका छन्। विश्वभरिका हवाईजहाजहरुले उडान भर्ने आकाशमा अहिले बिभिन्न थरिका चराचुरुङ्गीहरुले स्वतन्त्ररुपमा उडान भरिरहेका छन्।
घडीका तिनवटा सुईहरुले हाम्रो भित्तामा झुन्डाइएको पत्रिकाको पानाहरुलाई बैशाष,ज्येष्ठ असार….चैत्र गर्दै पल्टाएर २०७६ साललाई बिदा गरिसकेको छ भने ऋतुहरुको राजा बसन्त ऋतु हाम्रै घरआँगनमा आएर नयाँ बर्ष २०७७ साललाई स्वागत गर्न टक्क उभिएको छ। तैपनि हामीमा विगतको जस्तो कुनै उमङ्ग छैन।
अहिले मान्छेहरु सधैँजसो भेला हुने चौतारीहरु खाली छन्। दिनहुँ मान्छेहरुको घुँइचो लाग्ने प्रसिद्ध मन्दिर,गुम्बा र देबालयहरु पौराणिक कालमा जस्तो अहिले तपस्वि ऋषिहरुले तपस्या गर्ने स्थान जस्तै शान्त भएका छन्। व्यापार गर्न खोलिएका सटरहरु अब कसरी साँबा र ब्याज तिर्ने ?भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।बजारहरु पुरै बन्द छन्।
दिनहुँ गाडीमोटरले व्यस्त रहने राजमार्गहरु यतिबेला शान्त भई मात्र चराचुरुङ्गी र जिवजनावर खेल्ने र सुत्ने ठाउँ भएका छन्। सदियौँदेखि जीव जनावरहरुलाई चिडियाखानामा कैद गरेर रमाउने हामी मान्छेहरु अहिले आफ्नै घरभित्र कैद भएका छौँ। प्रत्येक बर्ष नयाँ बर्षमा नयाँ कपडा लगाएर नयाँ ठाऊँ घुम्न मन पराउने हामीहरु अहिले उहि पुरानै घरमा पुरानै कपडा लगाएर पुरानै परिकार खाई पुरानै फिल्म हेरेर दिन बिताउँन बाध्य भएका छौँ।
दिनमा धैरै पटक अनुहारमा हात लिने हामी मान्छेहरु अहिले आफ्नै हात देखेर पनि भयभित भएका छौँ। साबुन पानीले हात धुँदा पनि २० सेकेन्ड पुग्यो कि पुगेन ? भनेर घडि हेर्न थालिसकेका छौँ। जहिले पनि साथीभाई बिना एक्लै बस्न नसक्ने हामी अहिले मान्छे देखी मान्छे त्रसित छौँ। बाहिर हिड्दा होस् या घरभित्र मान्छे-मान्छेबीच दुरी नाप्न थालिसकेका छौँ।
ईस्वी संवत मान्ने देशहरुको नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वभरीका करिव २१० ओटै देश भ्रमण गरी नेपालमा पनि राजा विक्रमादित्यले चलाएको विक्रम संवतको नयाँ बर्षको पूर्व सन्ध्यामा नै भित्रिएको छ। मानव जिवनमा आएको यो महामारी पहिलो महामारी भने होइन ।यस भन्दा पहिला आएका प्लेग र स्पेनिस फ्लु जस्ता महामारीले झन लाखौँ मानिसहरुको प्राण लिएको हामीसँग इतिहाँस छ।
माल्थसको सिद्धान्त अनुसार मान्छेले लोभ र लालचमा परी प्रकृतिको सन्तुलन बिगारेपछि प्रकृतिले आफै सन्तुलन मिलाउनलाई यस्ता महामारी र प्राकृतिक प्रकोप ल्याउने गर्दछ भन्ने विश्वाश गरिन्छ। आशा गरौँ नया बर्षसँगै भित्रिएको यस नयाँ कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिएर जानेछ। पैसा र हतियारको बलले मात्रै संसार र यसका प्राणीहरुमाथी विजय प्राप्त गर्न सकिदोरहेनछ।
एक्काईसौँ सताब्दिमा भर्चुअल लर्निङ्ग कति आवश्यक रहेछ ?भन्ने दर्शाइदिएको छ ।अन्य प्राणीहरुको हत्या गरी आहार बनाउनु कति प्रतिपादक हुँदो रहेछ ? भन्ने उदाङ्गो पारिदिएको छ। आफ्नो गाउँ र घरपरिवार छाडि सहरको रमाइलोमा छिर्नु भनेको त क्षणिक रहेछ आखिर मर्दा पर्दा चाहिने त गाऊँकै स्वच्छ हावापानी नै रहेछ भन्ने राम्रै उदाहरण प्रस्तुत गरिदिएको छ।
एक्काइसौँ सताब्दिमा आएर पनि साबुन पानीले मिचिमिची हात धुन सिकाएर राज्यले मानव विकाशको पहिलो खुड्किलो स्वास्थ्य र शिक्षालाई कति अपहेलना गरेको रहेछ भन्ने उजागर गरिदिएर खिल्लि उडाएको छ। कालाबजारी गर्ने व्यापारी र भ्रष्टचारी नेताहरुको त नाङ्गो नाँच नै देखाईदिएको छ। विन्सट चर्चिलले भनेझैँ निरावादीहरु अवसरमा समस्या देख्छन् भने आशावादीहरु समस्यामा अवसर देख्छन्।
त्यस्तै यस वर्तमानमा रहेको कालो बादल हराएपछि नयाँ बर्षसँगै छिरेको यस नयाँ संकटले अवश्य हामीमाझ सुनौलौ नयाँ विहानी बोकेर ल्याउनेछ ।हामी सम्पूर्ण मानवमालाई नयाँ सोच र नयाँ विचारको नयाँ जिवनशैली दिनेछ। जसले अब यस देशलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भई भ्रष्टचार गर्ने नेता होइन शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहिलो प्राथमिकता दिने नयाँ नेतृत्व दिनेछ। विश्वलाई शक्ती र पैसाको आडम्बरमा दादागिरी गर्ने नेतृत्व होइन सबै देशलाई मानविय एकता दिने कुशल नयाँ नेतृत्व दिनेछ। खलबलिएको विश्वको दुषित वातावरण पुःन स्वच्छ हुनेछ।कोराना पछिको संसार भिन्न खालको हुनेछ ।बाँचेका मानिसहरु नयाँ जिवनशैलीका साथ नयाँ यूगमा प्रवेश गर्नेछन्।
अन्तमा, यस महामारीसँग जुध्दाजुध्दै अकालमा मृत्युवरण गरेका विश्वका १ लाख भन्दा बढी तमाम मानवहरुका मृत आत्माहरुले स्वर्गमा बास पाऊन र कोरना संक्रमित विश्वका करिव १८ लाख मानिसहरुको छिट्टै स्वास्थ्यमा सुधार आओस्। घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ। आम नेपालीहरुमा मेरो तर्फबाट नयाँ बर्षको विशेष शुभकामना।
(लेखक साहित्य र शिक्षण पेशामा आवद्ध छन्।)